Yaa iska lahaa mas’uuliyadda sida uu Muqdisho ku yimid qofkii ugu horeeyay ee looga shakiyay cudurka CronaVirus?!! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized Yaa iska lahaa mas’uuliyadda sida uu Muqdisho ku yimid qofkii ugu horeeyay...
Yaa iska lahaa mas’uuliyadda sida uu Muqdisho ku yimid qofkii ugu horeeyay ee looga shakiyay cudurka CronaVirus?!!
Waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan qaabkii arday Soomaaliyeed kana yimid dalka Shiinaha uga soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho kaasi oo maalintii shalay saraakiisha caafimaadka Dowladda Soomaaliya ka qabteen gudaha garoonkaasi.
Ardayga Soomaaliga ah ayaa diyaarad ka raacay gobol ka tirsan dalka Shiinaha isagoo saarnaa Diyaaradda Ethiopian Arlines waxa uu soo maray dalalka Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya, wuxuuna ku degay garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ah halkii uu ku ekaa safarkiisa.
Saraakiisha Wasaaradda caafimaadka Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wiilkan ardayga ah aanu ka muuqan astaamaha cudurka halista ah ee CronaVirus, hase yeeshee waxay sheegeen in la geeyay goob lagu karantiilo dadka laga shakiyay xaaladooda caafimaad halkaasi oo uu ku jirayo muddo 14-maalin ah.
Agaasimaha tayeynta caafimaadka ee Wasaaradda caafimaadka Dr. C/risaaq Yuusuf Aadan oo la hadlayay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in wiilkan ardayda Soomaaliyeed ah uu yahay qofkii ugu horeeyay ee looga shakiyo cudurka Cronavirus xaaladiisa caafimaad wanaagsan tahay isla markaana aanay ka muuqan calaamadaha cudurkaasi.
“Khaladka ugu weyn mas’uuliyadiisa waxaa qaadeysa shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo Muqdisho ka dejisay ardayga Soomaaliyeed ee Shiinaha ka yimid” ayuu yiri Agaasime C/risaaq oo sheegay in shirkaddaasi jebisay awaamiir horay dowladdu horay ugu soo rogtay shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya tegaya.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda caafimaadka ayaa lagu dalbaday in shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah ee dalka imaanaya fuliyaan amarro horay loogu soo rogay oo ku saabsan inaysan dadka ka imaanaya dalka dibadiisa si toos ah uga dejin garoomada dalka Soomaaliya.
Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa lagu eedeeyay inay jebisay nidaamka dowladda u dejisay hannaanka socdaalka dalka kaddib markii uu soo ifbaxay faafitaanka cudurka halista ee Cronavirus, waxayna wasaaradda caafimaadka qoraalkeeda ka dalbatay hay’adda duulimaadka iyo saadaasha hawada in maamulka shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines su’aalo laga weydiiyo sababaha la xiriira inay Muqdisho ka dejiso qof ka yimid dalka Shiinaha oo ah dalkii ugu horeeyay ee uu ka dillaacay cudurka Cronavirus.
“Waxaan ballaarineynaa feejignaanta cudurkaan oo dalalka waaweyn ee caalamka fara ba’an ku haya” ayuu yiri Dr. C/risaaq Yuusuf oo sheegay in la kordhinayo dadaalka looga hortegayo in cudurka Cronavirus aanu ku faafin dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale waxaa sii kordhaya dadka u geeriyoonaya cudurka halista ah kuwaasi oo ku nool dalalka caalamka qaarkood, sida Yurub, Aasiya, Afrika, Ameerika iyo Australia, waxaana bukaanada uu soo ritay tiradoodu kor u dhaafayaan ilaa 5-Kun qof, halka 2-kun qof in ka badan ay u geeiyoodeen.
DIYAARIYE: Jabriil Max’ud Nuur (Jabra-Shaaciye)